Ninka Ugu Taajirsan Adduunka oo Hantidiisa Kala Bar Wayn Doona SABAB?
January 11, 2019 puntlandnews Ciyaaro, Wararka Maanta 0
Madaxa Shirkadda qalabka Elektarooniga ee Amazon iyo xaaskiisa MacKenzie ayaa is furaya ka dib markii ay qoys wada ahaayeen muddo 25 sano ah. Arintan ayaa ka dhigan in hantida Bezos oo gaareysa $137 bilyan kala bar la siin doono xaaskiisa ay kala tagayaan MacKenzie taasoo ka dhigeysa iney noqoto haweeneyda dunida ugu taajirsan.
Lamaanahan ayaa warka ku saabsan furriinkooda ugu dhawaaqay bayaan ay si wada jir ah Arbacadii u soo dhigeen barta Twiter-ka. “Ka dib wakhti dheer oo ay naga dhex jirtay isfaham darro, isla markaana aan marar badan isku daynay inaan kala tagno, waxaan hadda go’aansannay inaan is furno, nolosheennana aan sii wadanno annagoo saaxiibo ah”, ayey lamaanaha ku yiraahdeen bayaankooda.
Mr Bezos oo u dhashay dalka Mareykanka iyo xaaskiisa ayaa leh 4 carruur ah oo isugu jira 3 wiil oo ay dhaleen iyo 1 gabar oo ay soo korsadeen. Warbaahinta dalka Mareykanka ayaa soo tabisay in Mr Bezos uu xiriir khaas ah la sameeyay haweeney horay wariye uga ahaan jitay telefishinka Fox TV, taasoo lagu magacaabo Lauren Sánchez.